विचार Archives - जनसहयोग
Visit Nepal 2020 को अवसरमा देश तथा विदेशमा नेपालीहरू तातीरहदा सम्बन्धीत निकायहरु चाही दिन प्रतिदिन लाहप्रभाही गरि रहेका छन ! २०२०पौष २६ गते बिहान २:३०को फ़्लाइट न RA 411 नेपाल एयरलाइन्सको जापान उडान ५ मिनेट […]
गान्बात्ते ने “मेहनत गर ”
उसले भर्खरै भनेको शब्द अर्थ मेहनत गर। कति गर्नु? मेसिन भन्दा अघि छु। एक घन्टामा चौबिस सय प्लेट ‘रामेन’ नविराई पठाउँछ मेसिन म नविराई त्यसमा ‘सस’ हाल्छु दुईटा छ मेसिन म एक्लै भ्याउँछु मेसिन भन्दा […]